Xulka Gabiley Oo 2-1 Ku Carraabiyey Daad-Madheedh Iyo Xiddiga Cabdi Riyaad Oo Laba Gool Dhaliyay | FooreNews
Home Aragtida Dadweynaha Xulka Gabiley Oo 2-1 Ku Carraabiyey Daad-Madheedh Iyo Xiddiga Cabdi Riyaad Oo Laba Gool Dhaliyay
Xulka Gabiley Oo 2-1 Ku Carraabiyey Daad-Madheedh Iyo Xiddiga Cabdi Riyaad Oo Laba Gool Dhaliyay
Waxaa maalintii afraad si hamsami ah Hargaysa Stadium uga socda tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland wareegooda siddeed dhamaadka. Iyada oo hore wareegii kowaad ee isreeb reebka tartanka ciyaaraha Gobolada Somaliland lagu soo qabtay gobolada Awdal iyo Togdheer, ayaa wareega labaad ee sideed dhamaadku ay maalmihii ugu danbeeyay ka socdeen Hargaysa Stadium oo la dhigay cawska macmalka ah, waana markii ugu horaysay ee garoonkan sida loo casriyeeyay. Kulanka galabta Hargaysa Stadium loogu balansanaa ayaa ahaa kulanka labaad ee Group B oo lagu tilmaamo groupka dhimashada, waxaana fooda isku daray xulalka gobolada Gabiley iyo Daad-Madheedh, waxaana shalay kulan isla Groupkan ka tirsanaa guul muhiim ah gaadhay gobolka Hawd oo 2:0 ku garaacay xulka goblka Sool, sidaa daraadeed Gabiley iyo Daad-Madheedh ayaa doonayay in Hawd la dhibco noqdaan si ay fursad ugu heli karaanu soo bixitaanka wareega afar dhamaadka.
Kulankan ayaa ahaa kulan aad u adag isla markaana ay gobolada Gabiley iyo Daad-Madheedh ay guul ku doonayeen laakiin qaybtii hore ee ciyaarta xulka gobolka gabiley ayaa dadaal badan u sameeyay sidii ay natiijada ciyaarta dhinacooda u keeni lahaayeen waxayna sameeyeen fursado fiican iyaga oo kubbad isku dhiibasho fiican samaynayay.
Xulka gobolka Gabiley ayaa ugu danbayn dadaalkooda ka midho dhaliyay waxayna heleen goolka ay hogaanka ciyaarta kula wareegeen waxaana goolkan u saxiixay xidiga khibrada wayn ciyaaraha gobolada Somaliland u leh ee Cabdiriyad kaas oo shabaqa Daad-Madheedh ku hubsaday kubbada kadib weerar qurux badan oo ay Gabiley soo qaaday, waxayna ciyaartu noqotay 1:0 ay Gabiley hogaanka ku qabtay. Cabdiriyad ayaa hore ugu soo ciyaaray gobolka Maroodijeex wuxuuna kula soo guulaystay labadii koob ee ugu danbeeyay isaga oo waliba door wayn ku lahaa tartankii ciyaaraha Somaliland ee lagu qabtay Gobolka Togdheer gaar ahaan magaalo madaxdiisa Burco. Cabdiriyad ayaa ka mid ahaa labadii ciyaartoy ee sanadkii 2004 kii kooxda Real Madrid booqashada ku tagay ee Zinedine Zidane uu sida wayn u qaabilay. Khibradiisa ayuuna daad-dheedh dhibaato ugu abuuray. Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1:0 ay uu gobolka Gabiley gacanta sare ku lahaa. Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta xulka gobolka Daad-Madheedh ayaa soo laabtay iyaga oo si xoogan u doonaya goolka barbaraha waxayna markiiba abuureen fursado tiro badan halka sidoo kale loo dhigay kubbado dhawr ah oo laaga xorta ah iyada oo Xamse- Fabregas uu halis badan ku abuuray goolka Gabiley laakiin goolhayaha Gobolka Gabiley ee Nurdin ayaa si fiican xulka gobolkiisa halista uga ilaalinayay.
Xulka Gobolka Gabiley ayaa helay goolkooda labaad ee ay dhibaatada wayn ugu abuureen xulka gobolka Daad-Madheedh waxaana markale gool qurux badan Gabiley u saxiixay khabiirka garooka qabsaday ee Cabdiriyad kaas oo si waayo aragnimo ku dheehan tahay u kala dhantaalay Daad-Madheed isaga oo ciyaarta ka dhigay 2:0 ay Gabiley hogaanka ku dheeraysatay. Goolhayaha gobolka Daad-Madheedh ee Cumar Cabdalla ayaa awoodi waayay in uu wax badbaadin ah ka sameeyo goolka Cabdi Riyad.
Gobolka Daad-Madheedh ayaa ciyaarta dib ugu soo laabtay kadib markii ay gool rekoodhe ahaa ku dhashadeen goolka xamaasada ciyaarta sare u qaaday, waxayna ciyaartu noqotay 2:1 ay wali Gabiley hogaanka ciyaarta ku hayso.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2:1 uu xulka gobolka Gabiley guul kaga gaadhay dhigooda Daad-Madheedh iyada oo xulka Gobolka Gabiley uu helay saddexdii dhibcood ee ugu danbeeyay waxayna isku dhibco yihiin gobolka Hawd oo isna shalay guul ka gaadhay Sool. Waxaana la soo gabagabeeyay kulamada wareega kowaad ee sideed dhamaadka iyada oo barri kulamada labaad ay iskaga hor iman doonaan Sanaag iyo Xaysimo.
KALA SARAYNTA GROUP B:
1-Gobolka Hawd= 3 dhibcood, +2 gool
2-Gobolka Gabiley=3dhibcood, +1 gool
3-Gobolka D.Madheedh= 0 dhibic, -1 gool
4- Gobolka Sool= 0 Dhibic, -2 gool
Previous PostMa Hoggaamiyey Boqortooyo Boqor Dhakhtar Ahi Adduunka? - Qalinka: Maxamed Faarax Qoti Next Post“Hawiye Xasuuq Bay U Gaysteen Daarood, Raggii Na Laayay Inaan Madaxtinimo Ugu Dirnaa Waa Mid Aannaan……." Q: 100aad